Gmail Account အသစ်ပြုလုပ်နည်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Gmail Account အသစ်ပြုလုပ်နည်း
Gmail Account အသစ်ပြုလုပ်နည်း
Posted by TNO on Aug 18, 2011 in Computers & Technology, How To.., Software & Links | 13 comments
thet naing oo has written2post in this Website..
gmail account အသစ်ပြုလုပ်နည်းဆိုလို့ .. ၀င်မန်းမလို့ ကြည့်လိုက်တာ … ဘာမှလည်း မပါဘူး … ။
ဒီမှာကိုယ့်လူ… အိမ်သာထဲက .. အဲ …မှားကုန်ပြီ…
ဒီမှာကိုယ့်လူ … စာရေးလျှင် ကိုယ်တယောက်တည်း နားလည်အောင်မရေးပါနဲ့… သူများလည်း နားလည်အောင် ရေးပါဦး …
download လုပ်ရမယ့် link လေးပေးထားတယ်လေ၊ မရဘူးလား၊ ဒီထဲမှာ စာရိုက်ရတာ အဆင်မပြေလို့word နဲ့ ရိုက်ပြီးတင်ပေးထားတာ၊ တချက်စစ်လိုက်ပါအုံး
ရွာ၏ ဥသျှောက် ဖိုက်တာ တုံ ကို ရိုရို သေသေ ဆက်ဆံဘာ..ဟွန်း.ဟွန်း.
ပုံလေးတွေနဲ့သေချာရှင်းပြထားတဲ့အတွက် ကျေးကျေး..
ပြောရရင်တော့ ဒီ Tut ကတော့ လုံးဝ အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ ..မဲပေးခဲ့ပါတယ်..
လိုချင်တဲ့လူတွေ ဒေါင်းထားလိုက်ပါလို့ ပဲ..
အင်းကြိုးစားကြည့်ပါမယ်။အသစ်ဖွင့်လို့ ပါ လိုချင်နေတာကြာပါပီ။ကျေးဇူးပါနော်
ဒီလောက်ရှင်းလင်းတဲ့ ရေးနည်းနဲ့ ရေးထားတာ ဒီတစ်ခါပဲ တွေ့ဘူးတယ်
ဒီလိုကြီး ခေါင်းစဉ်က မပေးသင့်ဘူးထင်တယ် ဘာမှလည်းမရေးပြပဲနဲ့လေ….
လုပ်လို့လည်းမရဘူး .. ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲဗျ ကို့လူရ
2011.08.18 ရေးနည်း ပဲ
အကောင်.လုပ်ချင်၇င် လုပ်မည်.နာမည်၇ယ် ပို.၇မည်. လိပ်စာသာ ပြောပြပေးပါ။
တင်တဲ့ ပို့ စ်မှာ link ပါတယ်၊ အဲဒီမှာ microsoft word နဲ့ အခုအတိုင်းရှင်းပြထားတယ်၊ ပုံတွေလည်းပါတယ်၊ ကျွန်တော်က document အနေနဲ့ မျှပေးလို့ ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါ၊
တချို့ က link ကိုမမြင်ဘဲ အထင်မှားနေကြတယ် ၊ အခုအောက်မှာ တော့ ပုံမပါဘဲ စာနဲ့ ဘဲရှင်းပြထားတယ် ( သူကြီး ပွို င့်ပေးစရာမလိုပါ )
ံGmail accout အသစ်ကို ဖုန်းနံပတ် verification ဖြင့််ပြုလုပ်နည်း 16 – AUG -2011
အခုနောက်ပိုင်း Gmail account အသစ်ဖွင့်ရတာတော်တော်လေးခက်လာတယ်၊ တခါတလေဖုန်းနံပတ်
တောင်းတယ်၊ တခါတလေမတောင်းဘူး၊ အခုနည်းလေးက ဖုန်းနံပတ်တောင်းတာကိုပြေလည်အောင်
လုပ်ပြီး account ဖွင့်တာပါ၊ တချို့ ဖုန်းနံပတ်တောင်းတဲ့ account ဟောင်းတွေ၊ တခြားဖုန်းနံပတ်တောင်းတဲ့ 
ပြသနာတွေကိုလည်း ဥာဏ်ရှိသလို ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်၊ အခု ထက်ထိတော့ဒီနည်းက သုံးလို့ ရပါသေးတယ်
–	လက်ရှိ gmail account ၁ခုရှိရမယ် ( * နောက်ဆုံးသုံးထားတာ အနည်းဆုံး ၁ရက်လောက်ဝေးရမယ်
ဘာလို့ လည်းဆိုတော့proxy ကျော်ပြီးသုံးတော့ မယ်၊ အခုချက်ချင်း Myanmar ip နဲ့ သုံးပြီး
US IP ချက်ချင်းပြောင်းသုံးရင် account lock ဖြစ်ပြီး Phone verification ချက်ချင်းလုပ်နေရမယ်)
–	Freedom account ၁ ခုရှိရမယ် (freedom လည်းသုံးတတ်ရမယ်)
–	Browser ၂ ခုရှိုရမယ် ( အောက်မှာ firefox, IE နဲ့ ပြောသွားမယ်)
–	Connection အသင့်အတင့်ကောင်းရမယ် ( သိပ်နှေးရင် အလုပ်မဖြစ်)
IE နဲ့ Gmail account သစ်ဖွင့်မယ်
Firefox နဲ့ Google Voice account ဖွင့်မယ် (အဲဒီကောင်က US နဲ့ Canada ၂ခုဘဲ Support လုပ်။
ဒါကြောင့် freedom သုံး)
Google Voice က US phone No. တခု အလကားပေးတယ်၊ SMS လက်ခံလို့ ရတယ်
အဲဒါနဲ့phone verification လုပ်မှာ
ပထမ freedom ကိုဖွင့်ပါ၊ configure ကိုသွားပါ၊ server connection မှာ US server တွေထဲက
တစ်ခုခုကိုထည့်ပါ၊ US server တွေက (ဥပမာ- ems01.your-freedom.de)
https://www.your-freedom.net/142/ မှာသွားကြည့်လို့ ရတယ်။ ပြီးရင် save and exit လုပ်ပြီး
start connection လုပ်ပါ၊
freedom တခါးပွင့်ပြီဆိုရင် firefox ကို freedom နဲ့ ချိတ်ပါ၊ ပြီးရင်
ကို firefox နဲ့ ဖွင့်ပါ၊ ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ရှိပြီးသား gmail account
ကိုထည့်ပါ၊ အဲဒီမှာ အောက်ကလိုပေါ်လာရင် I wantanew number ကိုရွေးပါ၊
ဒုတိယကွက်မှာ ကြိုက်တဲ့ နံပတ် ၃လုံးလောက်ထည့်ပြီး Search Numbers ကိုနှိပ်ပါ၊
သင့်အတွက်နံပတ်ရှာပေးလိမ့်မယ်၊ ပေါ်လာတဲ့ ထဲက ၁ခုခုကိုရွေးပြီး continue လုပ်ပါ၊
ကိုယ်ရွေးထားတဲ့ နံပတ်ကို ချရေးပြီးမှတ်ထားပါ၊
Enter Pin ဆိုတာပေါ်လာရင် နံပတ်၎လုံးစိတ်ကြိုက်ထည့်ပါ၊ အရေးမကြီးပါ၊ ပြီးရင် continue လုပ်ပါ ၊
ပြီးရင် phone no. တောင်းလိမ့်မယ်၊ အဲဒီအဆင့်ရောက်ရင်ရပ်ထားပါ၊
IE နဲ့ gmail account သစ်ကိုပုံမှန်အတိုင်းလုပ်ပါ ( အဲဒီမှာ browser ထပ်ရှိသေးရင် ထပ်လုပ်နိုင်သည်)
ဖုန်းနံပတ်ထည့်ရမယ့်နေရာရောက်ရင် Text Message ကိုရွေး country မှာ United States ကိုရွေးပြီး
ခုနကချရေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပတ် ကိုထည့်ပေးလိုက်ပါ
ပြီးရင် firefox က google voice ကိုပြန်သွားပါ ၊အဲဒီမှာ Cancel setup ကိုနှိပ်ပါ ၊အဲဒီမှာ
အောက်ပါအတိုင်း verification code ၆ လုံးရပါလိမ့်မယ် ၊
အဲဒီ ၆ လုံးကို IE မှာထည့်ပြီး gmail account ဆက်လုပ်သွားလို့ ရပါပြီ၊
မှတ်ချက်၊ browser နောက်ထပ်အပိုရှိပါက တပြိုင်တည်းထပ်လုပ်လို့ ရသည် ၊
Google voice cancel setup လုပ်ပြီးမှ ထပ်လုပ်ချင်ရင် အောက်နားလေးမှာ upgrade my account ကိုနှိပ်ပြီး အစကပြန်လုပ်လို့ ရပါသည်။ ( ကိုယ့်နံပတ် ၁၀ လုံးတော့ ပြောင်းသွားတယ်)
စာရေးထားတာမချောလို့ နားမလည်ရင်ခွင့်လွတ်ပေးပါ၊အဲဒီနည်းက မကြာခင် google ကပိတ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်လုပ်စရာရှိတာမြန်မြန်လုပ်ကြပါ
ကျေးဇူးပါ ကျွန်တော် အခု အချိန်ထိ အကောင်.ဖွင်.လို. အဆင်ပြေနေတဲ. နည်းလမ်းလည်းအောက်မှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အဆင့် ၁ အနေနဲ့ –
သင်ဟာအကောင့်အသစ်ဖွင့် ချင်သူဆိုရင် အကောင့်ရှိတဲ့ သင့်သူငယ်ချင်းတစ်ဦးဦးထံမှ သင့်ထံကို gmail ကနေတစ်ဆင့် invite mail ပို့ခိုင်းဖို့ လိုပါလိမ့်မယ် ..သင့်မှာ gmail acc နှစ်ခု အဆင့်သင့်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့
အကောင့်တစ်ခုကနေ နောက်တစ်ခုကို invite mail ပို့ရင်လဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်ဆီကနေ ပို့ခိုင်းတာပိုကောင်းပါတယ် ..(အကောင်. ၂ ခု၇ှိ၇င်လဲ ၇ပါတယ် အပြန်အလှန်ပို.ပေါ.ဗျာ ဟီးးး)
အဆင့် ၂ အနေနဲ့ –
invite mail ပို့ပုံလေးပါပဲ ဘာမှမခက်ပါဘူး gmail ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ left column အောက်ဆုံးနားလောက်မှာ inviteafriend ဆိုတဲ့ invite box လေးပါရှိပါတယ် ထိုဘောက်စ်ကလေးကနေတစ်ဆင့်
မိမိဆီကို invite လုပ်ခိုင်းမယ်ဆိုရင် သူငယ်ချင်းကို မိမိအကောင့်ကို ထိုဘောက်စ်ကလေးမှာ ရိုက်ထည့်ပြီး send invite ဆိုတာလေးကို ကလစ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ invite လုပ်လို့ ပြီးသွားပြီဆိုရင် အဲ့ဒီဘောက်လေးအောက်နားမှာပဲ
invite sent to…….(gmail acc name) ဆိုပြီးပေါ်လာပါလိမ့်မယ် ..
အဆင့် ၃ –
invite mail ပို့တဲ့အဆင့်ပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့ အပို့ခံရတဲ့သူရဲ့ gmail ထဲမှာ ….(sender name) has invited you to openaGoogle mail acc ဆိုပြီးမေးလ်တစ်စောင် ၀င်လာပါလိမ့်မယ် (မ၀င်လာဘူးဆိုရင် လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပို့ ခိုင်းပေါ့ :P) ထိုမေးလ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ To accept this invitation and register for your account, visit ဆိုတဲ့စာတန်းလေးရဲ့ အောက်မှာ လင့်လေးတစ်ခုကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် .. ထိုလင့်လေးကနေတစ်ဆင့်ဝင်ပြီးတော့ new gmail acc ကို ဟိုအရင် gmail acc တွေဖွင့်သလိုပဲ ဖွင့်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ(sign up တို. get start ဆိုတဲ.စာတွေ.၇င်လည်းနှိပ်ပြီး လုပ်နိုင်ပါတယ် မ၇၇င်တော. သူကြီး၇ှိတယ်နော :P)
(အကောင့်တော့ ဖွင့်တတ်ကြမယ်ထင်ပါတယ် နောက်တာ )
တစ်ခုသတိပေးချင်တာက အကောင့်အသစ်တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ ထိုဖွင့်လိုက်တဲ့အကောင့်ထဲမှာ invite mail ပေးပို့ထားတဲ့သူရဲ့ အကောင့်က auto ပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် သင့်မေးလ်းကို invite လုပ်ထားတဲ့သဘောပေါ့ accept or blocked သင့်သဘောအတိုင်းပါပဲ…
account အသစ်ဖွင့်ခြင်သူများ verification အတွက် ဖုန်းနံပါတ် ရောင်းမည် …. စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
banana shu says:
အမယ်လေးလေး ….. gmail account အသစ်ဖွင့်တာခက်လွန်းထာ….ဗမာပြည်ထဲကဘဲ..လုပ်ပေးမယ်..free